Macluumaad la xiriira weerarkii xalay lagu qaaday Beled Xaawo | Dhacdo
Home Wararka Maanta Macluumaad la xiriira weerarkii xalay lagu qaaday Beled Xaawo
Macluumaad la xiriira weerarkii xalay lagu qaaday Beled Xaawo
Maleeshiyaad taabacsan Dowladda Kenya ayaa xaqdii dhexe ee xalay weeraray Degmada Beled Xaawo ee Gobolka Gedo, ka dib markii ay iska soo abaabuleen gudaha dalka Kenya.
Maleeshiyadan ayaa waxaa horkacayay Sarkaal lagu magacaabo Korneyl Cabaas Ibraahim Gurey, oo toddobaadyadii ugu dambeysay maleeshiyadaasi ku uruurinayay xuduudda labada dal, gaar ahaan dhinaca Kenya.
Korneyl Gurey oo ka mid ahaa Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa markii dambe ka soo jeestay safka Kenya.
Sarkaal ka tirsan Saraakiisha Booliska ee Degmada Beled Xaawo ayaa Dhacdo.com uga xog waramay sida uu weerarkaasi ku bilowday iyo qaabka ay Ciidamada Dowladda uga hortaggeen.
“Saacaddu marka ay ahayd 2:00 iyo wa-xoogaa daqiiqado ah, dadka oo hurda ayaa waxaa xuduudda maleeshiyaad kala soo tallaabay nin la yiraahdo Cabaas Ibraahim Gurey, oo ka tirsan Saraakiisha Jubbaland ee muddooyinkanba ku sugnaa xuduudda Beled Xaawo iyo Mandhera. 1km wax ka yar ayay gudaha u soo galeen, markiiba waala ogaaday iyagoo maraaya dhisme ay Hormuud leedahay oo ku dhow kastamka, Ciidamadii Booliska ayaa ku baxay, dagaal ayaana meesha ka dhacay.” Ayuu yiri Sarkaalkan oo magaciisa ka gaabsaday.
Waxa kaloo uu yiri “Haddii ay xabaddu wax yar socotay dib baa loo ceyriyay maleeshiyadii uu watay Cabaas Ibraahim, saddex nin-na waa laga reebay.”
Sarkaalkan ayaa ku waramaya in ay horeyba ula socdeen abaabulkii ugu dambeeyay ee Kenya ka waday Degmada Mandhera, oo ood wadaag la ah Beled Xaawo.
“Dhaqdhaqaaqooda waan la soconay, Maqribkii ayay Kenya demisay Isgaarsiintii Shirkadda Safaricom, shalay galab-na bukaanadii rayidka ee ku jiray Isbitaalka weyn ee Mandhera ayaa laga daad gureeyay, waxay dhaheen dhaawacyo ayaa imaan kara ee dadka isbitaalada kale ee yar yarka hala geeyo.” Ayuu yiri Sarkaalku.
Mar uu ka hadlayay khasaaraha dhankooda ka soo gaaray dagaalka ayuu yiri “Allaha u naxariistee waxaa dagaalka inooga shahiiday Taliye Kuxigeenkii Saldhigga Beled Xaawo, Xidigle Maxamed Cabdinuur, hal askarina waa dhaawac.”
Dhanka kale Ciidamada Kenya ayaa madaafiic xoogan ku garaacay Degmada Beled Xaawo, sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka.
Ciidamada Kenya ee ku sugan xuduudda labada degmo ayaa madaafiicda ka tuurayay xuduudda Mandhera.
Dowladda Somaliya ayaa cambaareysay weerarka ay maleeshiyada Kenya soo hubeysay ku qaadeen degmadaasi. Dowladdu waxay xalay sheegtay in la fashiliyay weerarkaasi.
Previous articleWasiir Fiqi oo ka hadlay dagaalkii Shabaab lagu jebiyay ee Bacaadweyne
Next articleJubbaland oo ka hadashay dagaalka ka socdo Beled Xaawo